War saxaafadeed – R/Wasaare Gaas oo kormeeray jiida hore ee ciidanka ee Dayniile, Muqdisho. – Radio Daljir
Abriil 21, 2012 12:00 b 0
Muqdisho, April 21 – Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta booqasho kormeer ah ku tagay jiida hore ee dhufeesyada degmada Dayniile ee duleedka Magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa waxaa kormeerkiisan ku wehlinayay Wasiirka Gaashaandhigga dowladda Mudane Xuseen Carab Ciise, Taliyaha Hay?adda Nabadsugidda Qaranka Mudane Fiqi iyo saraakiil kale.
Waxaa Ra?iisul Wasaaruhu halkaasi ku soo dhaweeyay taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed Gen.Diini iyo abaanduulaha ciidnak Xoogga dalka Soomaaliyeed Gen. Dhagabadan iyo Taliye ku xigeenka ciidanka AMISOM, waxaa warbixin ka siiyay taliye ku xigeenka AMISOM isla maraana sheegay in wakhti aan fogayn la wareegi doonaan Afgooye iyo Ceelasha Biyaha ciidankii howshaa qaban lahaana ay hadda diyaar ku yihiin halkaan.
Dhanka kale waxaa isna goobtaas hadal qiimo badan kajeediyey Ra?iisul wasaaraha XKMG ee Soomaaliya Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo u mahadcelieyey ciidamada XDS iyo kuwa AMISOM.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa shacabka ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidanka dowladda islamarkaana ay kala shaqeeyaan nabadda galyada dalka.
Ugu dambeyntii Ra?iisul Wasaaraha ayaa ganacsatada ugu baaqay iney bixiyaan canshuurta si ciidamada u hurayo naftooda iney ilaaliyaan amaanka dalka loogu siiyo mushaaraadka, Wuxuuna ciidamada ku dhiiri geliyay iney gutaan wajibaadkooda ka saaray dalka iyo dadka.
Somaliland oo sheegtay in ay ka laabatay wada-hadallo loo ballansanaa ee iyaga iyo dawlada federaalka, shuruudna ku xirtay.